China Air mmeba aro Manufacture na Factory | Kangpa
Ogwe mgbasawanye ikuku
1. Oge onu oriri bu mkpụmkpụ. Ọ ga - ewe sekọnd 3 iji kewaa ma debe oghere ikuku ikuku na ọkpọkọ akwụkwọ iji mezue onu oriri na nkwụsị. Ọ dịghị mkpa ikewapụ akụkụ ọ bụla na njedebe osisi iji jidesie tube akwụkwọ ahụ ike.
2. A na-etinye tube tube dị mfe: a na-akwagharị ma na-edozi tube tube ọ bụla n'ọnọdụ ọ bụla na axis site na omume nke ịgbanye na ịgbanye.
3. Nnukwu ibu ibu ibu: A pụrụ ikpebi ogo nke dayameta dị ka mkpa ndị ahịa chọrọ n'ezie, a na-ejikwa ígwè siri ike mee ka ibu ahụ dịkwuo elu.
A na-ekewa ọdụ ụgbọ elu ikuku n'ime ụdị warara isi na ụdị slat. Ogwe mgbasawanye ikuku dị ezigbo mma na ngwa ngwa iji. Naanị ihe ọ chọrọ bụ ịkwadebe ebe ikuku ya dị. A na-achịkwa ikuku ikuku dị n'etiti 6-8kg / cm2. Akụkụ ndị dị na mpụga (dịka gburugburu tube tube), ọ bụrụhaala na egbe ikuku na-ebu ume na ikuku ikuku na ikuku mgbasa ikuku, enwere ike mezue ya, akụkụ ndị ọzọ (dị ka tube akwụkwọ okirikiri) kwesịrị a tọhapụrụ ya mgbe a tọhapụrụ mpempe akwụkwọ ahụ, pịa aka ikuku ikuku aka Aka Enwere ike iwepụ mpempe mpụga ịmịpụta (dịka akwụkwọ tube gburugburu) n'akụkụ nke elu.
4. Ọdịmma akụ na ụba dị elu: A na-emepụta osisi ahụ maka ọrụ pụrụ iche, ma nwee ike iji ya maka ụdị akwụkwọ mpempe akwụkwọ niile nke ọkpụrụkpụ, mkpa, obosara na warara.
5. Nlekọta dị mfe na ogologo oge: Ogwe mgbasawanye ikuku bụ otu akụkụ, akụkụ nke ọ bụla na nhazi ya nwere nkọwa akọwapụtara, nke nwere ike ịgbanwere ma jiri ya mee ihe, na-eme ka ọ dị mfe ilekọta.
1. A na-eji ya eme ihe: Dị ka akụkụ nke aka ya, ikuku mgbasawanye dị site na 1 inch na 12 sentimita asatọ. Ogologo na nha kpebisiri ike site na ezigbo mkpa nke ndị ahịa. (Dịka ọmụmaatụ, akuku elu nke ikuku nke ikuku nke atọ nke anụ ọhịa bụ 74mm, na mgbe onu oriri bụ 78- 82mm;) ebe enwere ngwa ọrụ mmepụta ihe dịka ịchacha, ibipụta, ịkpụgharị, mkpuchi, laminating, ime akpa na ịde akwụkwọ. , ma ọ bụ ndị ọzọ metụtara center-asọfe igwe, ikuku mmeba aro nke anyị factory ike ga-eji.
2. akụ na ụba ma rụọ ọrụ nke ọma: a na-emezi atụmatụ ahụ maka mkpa ọrụ, ọ nwere ike tinye ya n'ụdị dị iche iche nke ọkpọkọ akpụkọ, dịka ọkpụrụkpụ, obosara, na warara.
3. Ogologo oge eji eme ihe na mmezi dị mfe: Ọ bụ ezie na ogwe mgbasawanye nke ikuku bụ ihe eji arụ ọrụ, akụkụ nke ọ bụla na nhazi nke ya nwere nkọwa akọwapụtara ma nwee ike iji ya na-arụ ọrụ, na-eme ka ọ dị mfe ilekọta. Anyị factory nwere ike chọrọ na àgwà nke akụkụ niile nke inflatable aro, na ngwaahịa mma bụ nnọọ ekwe nkwa.
4. Otu ngwa: Ogwe mgbasawanye ikuku bụ otu akụkụ nke igwe ikuku na ikuku. Akụkụ ọ bụla na nhazi ya nwere oke edozi ma nwee ike ire ere ma jikọta ya iji mee ka mmezi dị mma ma dịgide.
5. Ọkachamara: factorylọ ọrụ anyị nwere ọpụrụiche na mmepụta nke oghere mgbasa ikuku, ma enwere ndị injinia na ndị ọrụ aka ọrụ maka nyocha ahịa na imepụta, ntinye na ojiji nke mgbasa mgbasa.
6. Nnukwu ikike ikike: A pụrụ ịmepụta oghere mgbasa ikuku dị ka ụdị ahụ si dị, na-eji nchara dị elu mee ka ikike ịbawanye. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike ịhọrọ ihe nchara maka ndị nwere ibu ibu karịa 1 ton.
7. Oge ọrụ dị mkpirikpi: Ọ na - ewe 2 sekọnd ka ọ gbasaa ma kpochapụ ọkpọkọ mpịakọta iji kewaa ma debe ọkpọ mpịakọta. Ọ dị mfe ma adaba itinye mpịakọta tube, nchekwa ma na ọdabara. Enwere ike itinye ya n'ọrụ na akụrụngwa na akụrụngwa ejiri maka ikuku na ịtọpụ. Ogwe mgbasa ikuku. Ogologo nke ikuku mgbasa ikuku nwere ike ịbụ mita isii ma ọ bụ karịa, na obere oge nwere ike ịbụ ọtụtụ narị millimeters. A na-ekpebi ogologo dị ka mkpa ndị ahịa si dị.
8. The yinye ụdị ikuku mmeba aro kọwakwuru otu yinye, na fulcrum agbasa ọ bụla isi mmanya na-itule ike, nke adabara n'ibu rewinding nke isiokwu na arọ ibu ikike.
Osisi ịgbasa ikuku nke cantilever dị mma karịa oghere mgbasawanye nke ikuku n'ozuzu n'ihi na ọ bụghị iwu ka a na-ebutu ya oge ọ bụla. Enwere ike iwepụ ihe a mgbe emechara ya, n'ihi na obosara ya abụghị nnukwu, yabụ ọrụ okike dị mma. Nke a bụkwa usoro mgbasa ikuku nke ọtụtụ igwe nwere ikike dị mfe na obere obosara ahọrọ. Ọ bụrụhaala na a na-emezi ihe a na-afụ ọkụ megide oghere ikuku nke ikuku na-agbasa ikuku, enwere ike ịkọwa ikuku ikuku elu, agbụ ahụ ga-alaghachikwa na mbụ.
Ngwongwo ihe eji eme ihe nwere windo nke yiri igbe nke e gwuputara na njedebe nke aka oru nke cantilever mandrel iji hụ na nhazi nke nhazi nke ikpo okwu. A na-etinye oche na-ebu ihe n'ime ngọngọ nchara a na-ebugharị, a na-ejikwa wires bọl na-eme ka nchara ígwè dị elu. N'ịbụ nke mkpanaka ahụ kpaliri, ọnọdụ na-agagharị nke mkpanaka ahụ dị na akara nke mpempe akwụkwọ na-acha efere, ma na-eduzi nduzi ndị dị na elu na ala ala nke windo yiri igbe iji dozie ngọngọ nchara ahụ, ka hụ na nkwụsi ike nke ebe obibi akwụkwọ na-arụ ọrụ ọsọ ọsọ.
N'ime imewe a, mmezi nke mandrel bụ ihe akpaka kpamkpam, na ngagharị nke mkpanaka niile na mkpọchi nke njedebe ọdụ ahụ na-ewepu ihe mmadụ. A na-edozi ngọngọ nchara a na-ebugharị na etiti ahụ site na ọdụ ụgbọ elu ndị dị elu na nke ala, na n'ihi na mkpanaka ahụ na-agagharị na akara nke mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ ahụ, isi ihe dị na cylinder na-acha uhie uhie na ihe na-akwọ ụgbọala a na-emegharị bọlbụ bọlbụ na etiti Mpịakọta mpịakọta mpịakọta ahụ, ọ bụ naanị obere nrụgide mpaghara ka etolitere, na n'ihi na ibu ọrụ na-eme naanị n'etiti mpempe akwụkwọ mpịakọta ahụ, enweghị oge na nkwado ahụ etiti.
E nwere ọtụtụ ụdị, gụnyere 1 inch, 1.5 inch, 2 inch, 2,5 inch, 3 inch, 6 inch, 8 inch, 10 inch, 12 inch, wdg Ikuku mgbasa akụ nke dị iche iche nkọwa nwekwara ike-esichara na-emepụta dị ka ndị ahịa mkpa.
Nke gara aga: Ewepụghị haịdrọlik ọnwụ igwe
Osote: Gluu ala
Mgbasa Mgbapu ikuku
Hot gbazee gluu Ngwa, Automatic Hot gbazee mama mama Laminating Machine, Hot gbazee mama mama Laminating Machine N'ihi Uwe, Hot gbazee mama mama Laminating Machine na Ce Asambodo, Pur Hot gbazee gluu Nonwoven Laminating Machine, Pur Hot gbazee nrapado Laminating Machine,